इन्टरनेटमा आय - नेटवर्क मा नियमित छलफल गर्दै जो तातो विषयहरू एक। बस व्याख्या गर्न: इन्टरनेटमा आउन ढिलो होस् वा पछि गर्ने मान्छे यहाँ सामाग्री लाभ को संभावना महसुस। क्रमशः, र आफ्नो हात प्रयास गर्न यहाँ धेरै चाहनुहुन्छ - भनेर पारित को सीमा भएकोले जो कोहीले अनलाइन आय कमाउन, वास्तविक जीवनमा भन्दा कम छ सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
पैसा अनलाइन धेरै बनाउने तरिकाहरू। आफ्नो सूची बस असम्भव छ। तिनीहरूलाई धेरै लामो समय को लागि कसैले उच्च पर्याप्त आय ल्याउन सक्षम छन्। तर, यी प्रविधी को सबै भन्दा समय, पैसा र प्रयास को रूप मा प्रयोगकर्ता को भाग मा एक महत्वपूर्ण लगानी आवश्यक छ।
एक विकल्प, को clique प्रायोजकहरूले संग सहयोग छ रूपमा जो, अतिरिक्त पैसा कमाउन अनुमति दिन्छ। आय को यस प्रकार को लाभ को ज्ञान, वा पर्याप्त गर्न कुनै आवश्यकता छ वित्तीय स्रोतहरू पैसा बनाउन सुरु गर्न। तपाईंले मात्र इन्टरनेटमा इच्छा र पहुँच आवश्यक छ।
यस्तो भन्ने तथ्यलाई क्लिक लागि आय, साथै सबै भन्दा होनहार र पर्याप्त लामो-बस्ने परियोजनाहरूको एक, हामी यस लेखमा कवर हुनेछ।
को "क्लिक प्रायोजकहरूले" के हो?
इन्टरनेट वाणिज्य क्षेत्रमा गरिन आवश्यक के गर्न परिभाषित गर्न सुरु गर्न। त्यसैले, हामी थाह छ, त्यहाँ अनलाइन विज्ञापन को खरीद र बिक्री आधारित सम्पूर्ण व्यापार खण्ड छ। यो लिंक, ब्यानरहरू, मिडिया सामग्रीको कुनै पनि अन्य ढाँचाको फारम मा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। मुख्य विशेषता यो प्रकृति को इन्टरनेटमा मुद्रा आय ब्राउजिङ फलस्वरूप ल्याउँछ भन्ने छ।
तदनुसार, यो मोडेल, र निर्माण कार्य प्रायोजकहरूले क्लिकहरू। यसलाई - आफ्ना प्रयोगकर्ता (, लिंक मा क्लिक इमेल पढेर) विज्ञापन हेर्नको लागि भुक्तानी सेवाहरू। र (जस्तै साइटहरु) हो, बारी मा, मुद्रा विज्ञापनदाताहरु सशुल्क।
तपाईं कत्तिको कमाउन सक्नुहुन्छ?
तथ्यलाई कि क्लिक छ - यो वास्तविक पैसा ल्याउन सक्ने एउटा काम छ। इन्टरनेटमा धेरै मान्छे मा आय, प्रसंगवश, को clique सेवाहरू सुरु। धेरै यहाँ गर्न प्राप्त छैन भनेर अर्को कुरा। एक सभ्य आय, दैनिक जीवनमा वास्तविक तलब तुलना को सपना, यो आवश्यक छ।
एउटा उदाहरण दिन - यो त छ किन बुझ्न। एक सामान्य लिंक कामदार लागि भएको दिन तपाईंलाई 100 10 साइटहरूबाट $ 1 हेर्न चाहनुहुन्छ भन्ने हो, 0.1 1.5 सेन्ट प्राप्त गर्दछ। यस्तो विज्ञापन र हेर्ने मा अस्थायी प्रतिबन्ध को सानो संख्या दिइएको, तरिकामा कम्तिमा5$ कमाउन आशा - अनुभवहीन छ।
अर्को कुरा यी साइटहरूमा एक सान्दर्भिक प्रणाली छ कि तपाईं एक शेयर दिएको छ कि ती मान्छे को लाभ को कमाउन अनुमति दिन्छ कि छ। उदाहरणका लागि, तपाईं आफ्नो सान्दर्भिक क्लिक प्रत्येक लागि एक प्रतिशत केही hundredth कमाउन। यसरी, 100, 1,000 वा 10,000 मान्छे आमन्त्रित गरिन्छ को "सेना" संग, तपाईं एकदम सभ्य आय मा गणना गर्न सक्नुहुन्छ।
Neobux - विश्व प्रायोजक मा सबै भन्दा राम्रो
सबै भन्दा प्रसिद्ध र लोकप्रिय सेवा एक Neobux छ। समीक्षा यो छ कि संकेत - बाचेको व्यक्ति उद्योग, जो तथापि, अमेरिकी मूलका छ। फलस्वरूप - मुद्राहरू सूची मा घरेलू भुक्तानी प्रणाली को कमी जो सेवा गर्दछ गर्न। तर थप कि पछि।
साथै, जो यो Neobux मा आय छ, यो साइट एकदम विश्वव्यापी प्रचार छ। यसले थप हाकिमहरूले र साधारण मान्छे बनाउन त्यसैले थप अवसर छ भन्ने हो।
साथै, परियोजना तपाईं एक आय कमाउन सक्नुहुन्छ जो संग उपकरण सूची छ। उदाहरणका लागि, यो सिफारिश छ थप काम गर्न अनुमति दिने, Neobux, जोकोहीले भाडा, साथै अन्य विभिन्न अंक र बोनस लागि उपलब्ध छ। तर, परियोजनाको समग्र संगठन धेरै सरल छ।
यहाँ Monotonous काम - तपाईं लिंक मा क्लिक गर्नुहोस् र प्रतीक्षा लागि विज्ञापनदाता समय कसैको साइट ब्राउज निर्दिष्ट गर्न आवश्यक छ। यी कार्यहरू सिस्टम सहभागी आफ्नो इनाम प्राप्त गर्न सक्छ प्रत्येक लागि, त्यसपछि उहाँले निम्न भुक्तानी लिंक गर्न उत्प्रेरित गर्न सक्नुहुन्छ।
को चार्ज धेरै कारक आधारित गरेको छ। स्पष्टताको लागि, Neobux मा, समीक्षा जो हामी अगाडी हिड, त्यहाँ एक विशेष तालिका छ प्रकाशित। तपाईं विभिन्न स्थितिहरुमा को कार्यकर्ता unequal remuneration हुन् भनेर हेर्न सक्छन्। यस कारण, केही रणनीति प्रयोग गरेर तपाईं अधिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्। उदाहरणका लागि, तपाईं सिफारिश को धेरै छ भने, तपाईं $ 90 एक वर्षको लागि लागि सुन-स्थिति अर्डर योगदानको तिनीहरूलाई प्रत्येक मा ब्याज बढाउन खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तर, यो त 500-700 सिफारिश को उपस्थिति मा, उदाहरणका लागि, के गर्न उचित छ। तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई त सरल छैन प्राप्त गर्न।
तर, इच्छा भएको, तपाईं यस पछि आउन सक्नुहुन्छ। र Neobux सबै नै सुरु गर्नुहोस्। प्रयोगकर्ता दर्ता - काम पहिलो चरणको। क्यालिब्रेसन नियम, नयाँ प्रवेशकों संग कुनै समस्या छैन, नि: शुल्क गरेको छ, र। तपाईं बस भुक्तानी सहित तपाईंको डाटा निर्दिष्ट गर्न, र त्यसपछि सदस्य क्षेत्र जाने आवश्यक छ।
तपाईं जो तपाईंले अगाडि कसरी सार्ने बुझ्न मेनु हेर्न हुनेछ। विशेष, त्यहाँ एक खण्ड सेटिङ »(सेटिङ), र अरूलाई" रोजगार »(मिनी रोजगार), को छ" छ। Neobux (प्रमाण समीक्षा) मा काम को जटिलता भाषा बाधा छ। Bucs अंग्रेजी भाषा र उपलब्ध रूसी भाषा को सूची। त्यसैले, एक विकल्पको रूपमा, तपाईं गुगल अनुवाद, अनलाइन पृष्ठ अनुवाद गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
वास्तवमा, सबै छ। तपाईंलाई सुरू गर्न आवश्यक अर्को, पैसा को एक निश्चित रकम (निकासी लागि न्यूनतम रकम, यो निरन्तर प्रयोगकर्ता गतिविधि रूपमा परिवर्तन) प्राप्त गर्नुहोस्।
धन थप्ने वा वापस लागि विधिहरू
यहाँ कसरी काम गर्न हामी पहिले नै साथ व्यवहार गर्नुभयो छन् - हामी Neobux भुक्तानी गर्न कसरी, को प्रश्न फर्कनुहोस्। दुर्भाग्यवश, संग रूसी इलेक्ट्रोनिक मुद्रा परियोजना काम गर्दैन - यो प्राप्त र Payza, Payoneer, PayPal ले र Neteller मा दिन्छिन् - इन्टरनेटमा को विदेशी मुद्रा खण्ड लागि विशिष्ट। तर, पनि हाम्रो देशमा यी भुक्तानी संग यो के तपाईं छन् सम्भव समस्या बनाउन। तपाईं बस यी प्रणाली मध्ये एउटा खाता दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि धेरै अनलाइन एक्सचेंजर्स को एक द्वारा नै वा Webmoney Qiwi, "Yandex" को लागि प्रणाली को रूपरेखा मा मुद्रा परिवर्तन गर्न। न्यूनतम आयोग।
एउटै तरिका हुन सक्छ (तपाईं एक सुन स्थिति किन्न चाहनुहुन्छ भने, उदाहरणका लागि) अपग्रेड किन्न प्रशासित कोष।
यहाँ परियोजना अन्य सहभागीहरू मुछिएको सिस्टम यहाँ मेरो साथी ल्याउन प्रत्येक सदस्य प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो लागि उहाँले यहाँ उहाँलाई लागि काम गर्ने सबैलाई केही आय प्राप्त गर्नेछ। remuneration को राशि पृष्ठ Neobux मा प्रकाशित तालिका मा देख्न सकिन्छ। आफ्नो प्रत्यक्ष सिफारिश लागि $ 0,0005 देखि तपाईं एक सामान्य स्थिति छ भने, मामला मा $ 0.005 प्राप्त हुनेछ - सहभागीहरू देखि प्रतिक्रिया (साँच्चै, यो वेबसाइटमा डाटा देखि स्पष्ट छ रूपमा) बोर्ड छैन धेरै उच्च छ भन्ने तर्क। खाता प्रकार रूपमा सुधार गर्न यो आंकडा बढ्ने रूपमा देख्ने 1 प्रतिशत प्रति प्रयोगकर्ता दिइएको क्लिक।
यहाँ क्लिक उच्च प्रत्येक दुई पटक रूपमा लागि शुल्क - "ज्याला" वा "भाडामा" - सिफारिश अन्य प्रकारको रूपमा। तथापि, सामाग्री को लागि तपाईं पनि मासिक भुक्तानी गर्न हुनेछ। अधिक सिफारिश अधिक तिनीहरूले तपाईंलाई खर्च हुनेछ, किराया।
योग गर्न, त्यसपछि, को पाठ्यक्रम, सहभागीको को unambiguous सिफारिसहरू भनिन्छ गर्न सकिँदैन प्रणाली। घोटाला, जो मात्र प्रशासन लाभ - केही मानिसहरू Neobux कि दाबी। तिनीहरूले पाठ्यक्रम, क्रममा त्यहाँ वर्षसम्म काम गर्न आवश्यक हुनेछ, अधिक वा कम गम्भीर रकम कमाउन भनेर बुझ्न, प्रति क्लिक विज्ञापन भुक्तानी को कम दर हेर्न र।
पार्टीहरू अन्य भाग विपरीत approves: Neobux रणनीति, सबैलाई एकदम धेरै कमाउन सक्नुहुन्छ जो मार्फत सञ्चालन गर्न डिजाइन गर्न सकिन्छ। इच्छा, विचार र अनुभव को एक बिट - तपाईं यो सबै गर्न। परियोजना नै यसलाई 2008 देखि काम गर्दछ र धेरै लाख डलर यो समय भुक्तान थियो किनभने, पर्याप्त बलियो छ। र यो, को पाठ्यक्रम आंकडा छ।
त्यसैले, यो साँच्चै व्यक्तिगत कुरा छ - यो उपकरण लाग्न र आय तिनीहरूलाई गर्न विपरीत Neobux मा सफलता विश्वास नगर्ने, वा, मान्छे को श्रेणी व्यवहार।
साइटमा काम को लागि संभावनाहरु सहित समग्र तस्वीर, सन्दर्भमा, त्यसपछि तिनीहरूले पक्कै पनि छ। तपाईं एक पर्याप्त सान्दर्भिक आधार कमाउन व्यवस्थापन भने, यो, मेशिन मा राम्रो आय हुनेछ लागि काम देखि, त्यहाँ अन्य सहभागीहरू हुनेछ।
लपेटन, स्वचालन र यति मा: सट्टा यस्तो योजनाहरु निर्माण केही प्रयोगकर्ताहरू अवैध विधिहरू गर्न resorted छन्। उदाहरणका लागि, इन्टरनेट भनेर फिर्ता बस्न र सबै तपाईं लागि लिंक बाइपास एक्लै कम्प्युटरको लागि प्रतीक्षा गर्न अनुमति दिन्छ सेवा Neobux autoclicker लागि पाउन सकिन्छ। यस्तो लापरवाह मनोवृत्ति को मामला मा प्रयोगकर्ता खाता आफ्नो सबै आय हराउछ कि सेवा नियमहरु अवस्थामा वास्तवमा - तर, यो पार्टी को जोखिममा गरेको छ। के तपाईं साँच्चै काम यस्तो "कालो" तरिका मा लगे छैन भनेर प्रमाणित गर्न, यो व्यर्थ हुनेछ।
सेवा नै गर्न रूपमा - यसको थप काम शङ्का मा उत्पन्न छैन। परियोजना नियमित मान्छे आफ्नो अस्तित्व को सबै वर्ष को विशाल संख्या दिन्छिन्। अब प्रशासन यसलाई विभिन्न रोचक इनाम प्रणाली (जस्तै, बोनस अंक), केवल प्रयोगकर्ता मा काम गर्न प्रोत्साहित जो मा प्रवेश गर्छ। यो बारी मा परियोजना थप मानिसहरूलाई आकर्षित गर्छ। आफ्नो कार्य - तपाईंको विज्ञापन अरूलाई राखने, काम गर्न सान्दर्भिक लिंक, र यसरी एक इनाम को रूपमा प्राप्त आफ्नो जिम्मेवारी। तपाईंले यसलाई सरल छ, हेर्न!
कसरी "इन्स्टाग्राम" मा बेच्न: निर्देशन, सिफारिसहरू
अनलाइन मुद्रा बनाउन!?
इन्टरनेट-दोकान "Citylink": ग्राहक समीक्षा र कर्मचारी
पोसिलो सीरम फाल्नु
मारिया Shvetsova अभिनेत्री, फोटो, जीवनी मारिया Sergeyevna Shvetsova
मूल दुलही मूल्य पनि साई शैलीमा
को आयोडिन कसरी लागू गर्ने? प्रयोगको लागि निर्देशन
प्रतिमा "इपिफ्यानी Name": प्रतिमा को मूल्य (तस्बिर)
Niriides होटल4* (ग्रीस / रोड्स) - फोटो, मूल्यहरु र समीक्षा